Gareth Bale oo soo kireystay ciidan aad u hubeysan si ay u ilaaliyaan xafladda Arooskiisa (sidee wax u jiraan?) – Gool FM
(London) 17 Feb 2019. Xidigga garabka uga ciyaara kooooxda Reeeal Madrid iyo xulka Wales, Gareth Bale ayaa beddelay qorshaha xafladda arooskiisa oo markii hore ahayd inay ka dhacdo Vincigliata Castle ee gobolka Tuscany ee Talyaaniga.
Laakiin laacibkan isbucii Real Madrid ka qaata 773,000 oo dollar (600,000 lacagta Pound-ka Ingiriiska ah) ayaa lagula taliyay in uu kireysto jasiiradda Tagomago ee Spain oo 100 mitir u jirta jasiiradda caanka ah ee Ibiza, taasoo uu gebi ahaanteedba kireystay.
Sababaha uu u beddelay Bale goobtii uu arooskiisu ka dhici lahaa ayaa ah in reerka ay ka soo jeeddo Bale saaxiibtiis Emma Rhys-Jones ay sanadkii hore bar tilmaameedsadeen kooxo burcad hubeysan ah, iyadoo boorso ay ku jirtay 1 milyan oo ginina la waayay.
Hanjabaadyo kale oo loo soo diray Bale saaxiibtiisa ayaa keentay in lagula taliyo in laacibku beddelo qorshihii arooskiisa, isla markaana waxa uu haatan soo kireystay Askar hubeysan oo horey uga tirsanaan jiray ciidammada cirka Ingiriiska ee SAS.
Jasiiradda xafladda Arooska Bale lagu qaban doono ee Tagomago ayaa saacaddii waxaa lagu kireeyaa 600 oo dollar, waxaana iman doona oo keliya 150 qofood oo ay ku jiraan ciyaartooy kubadda cagta ah kuwaasoo markab looga soo qaadi doono jasiiradda Ibiza, cid aan la casuuminna ma soo gaari doonto jasiiraddaasi.
Shaxda rasmiga ah kulanka horyaalka La Liga ee kooxaha Real Madrid Vs Girona